mividy firaketana vinyl any New York | Vaovao momba ny dia
Na firy na firy na firy ny faharetany, dia hisy foana ny olona te handeha amin'ny fivarotana iray ary hividy firaketana sy vinyl. Na dia marina aza fa mihavitsy ny olona mandeha mankany amin'ny magazay mividy ireto karazana entana ireto dia mbola misy ihany ny olona manao izany ary manangona azy ireo mieritreritra fa amin'ny ho avy tsy ho ela, Azo inoana fa ireo firaketana sy vinyl tsy vidian'olona ireo dia manana sanda ambony kokoa ... toy ny entan'ny mpanangona. Androany ny fividianana rakitsoratra sy vinyl any New York dia tsy mora intsony, fa mbola azo atao ihany.
Hatramin'ny tsy ela akory izay, New York City dia tanàna iray izay nahitan'ny mpankafy mozika paradisa lehibe. Io no tanàna tonga lafatra nividy mozika, hividianana kojan'ny mpanangom-bokatra, ho an'ireo olona fetisy vinina na fanontana tsy mandeha intsony. Tsy isalasalana fa tanàna tonga lafatra izy nividy ny vokatra rehetra mifandraika amin'ny mozika tadiavinao. Any New York dia azonao atao ny mividy kasety taloha, afisy mozika, izay kapila tianao ho hitanao, rakikira tsy hita ao anaty fanangonana, na inona na inona! Fa ahoana izao?
1 Manakatona tsikelikely ry zareo ...
2 ... Saingy mbola misy fivarotana misokatra
2.1 Generations Records
2.4 Varotra an-tsokosoko
2.6 Academy Records
Manakatona tsikelikely ry zareo ...
Androany amin'ny Internet sy amin'ny pejin-tranonkala marobe izay ahafahanao mividy sy mivarotra fitaovam-mozika dia nahatonga ny mpanjifa maro kokoa tsy hifidy ny hivoaka ny trano hahafahany mitady an'ity karazana fitaovana sy mozika ity. Izany rehetra izany dia nahatonga ny fivarotana firaketana malaza sy malaza an'i New York dia tsy maintsy nanidy na niverina nivadika karazana orinasa hafa mba ho tafavoaka velona.
Androany dia mety ho somary sarotra ny mividy firaketana any New York amin'ny magazay kely. Ankehitriny, ny zavatra mahazatra indrindra raha te hividy vinina na rakitsoratra eto amin'ity tanàna ity ianao dia ny mankany amin'ireo magazay fivarotana na fivarotana faharoa izay mety hanana relic tsindraindray.
... Saingy mbola misy fivarotana misokatra
Ny vaovao tsara dia mbola misy fivarotana misokatra ao amin'ny Big Apple mba hahafahanao mitsidika raha tia mozika ianao ary tianao ny mankafy cd's, vinyl, firaketana na zavatra hafa azo vidiana amin'ireo karazana magazay ireo.. Tadidio fa na dia vitsy aza ny sisa dia mendrika ny hitsidika izy ireo raha mandeha any New York amin'ny dia.
Ity fivarotana ity dia iray amin'ireo malaza sy malaza indrindra any New York. Fivarotana tena ilaina izy io raha tianao ny tontolon'ny rock. Inona koa, raha tianao ny mozika hafa toy ny punk, hardcore na vy, tokony handeha amin'ny fitsidihanao tokoa ianao.
Raha mieritreritra ianao fa magazay kely io dia diso ianao, manana rihana roa feno kolontsaina mozika izay tianao hotsidihina izy io. Indraindray, satria manana habaka ampy dia anaovana kaonseritra kely ihany koa. Raha tsara vintana ianao manatona ny iray amin'izy ireo, dia atoroko azy io, miteraka rivo-piainana tsara eo amin'ny vahoaka sy ireo vondrona milalao izany. Ny Generation Records dia hita ao amin'ny 210 Thompson St., eo anelanelan'ny Bleeker sy West 3rd St.
Bleekers Bob's Records dia fivarotana mozika iray hafa izay manakaiky ilay nolazaiko teo aloha. Eo amin'ny arabe mitovy amin'ny Generation Records no misy azy fa amin'ny isa 118.
Mety tsara koa ity lay ity mpiangaly gadona rock y punckrockers. Na dia fivarotana manokana ho an'ity fomba mozika ity aza izy io, ny marina dia afaka mahita karazana mozika na kasainao ho hita ianao. Izy io dia manana katalaogin'ny fitaovana faharoa, ka afaka mahita zavatra sy relik izay sarotra tadiavina any an-kafa ianao, ary azo inoana fa lafo izany.
Disc-O-Rama dia fivarotana firaketana izay ahitanao eo ivelan'ny Greenwich Village, amin'ny 44 West th Street. Ao amin'ny tranonkalany ofisialy dia azonao atao ny mahita ny katalaogin'ny vokatra ananan'izy ireo ary ao amin'ny fivarotany dia afaka mandany fotoana be ianao amin'ny fikarohana amin'ireo singa rehetra amidiny, toa ny cd's, dvd's ary koa vinyl.
Tena mifaninana ny vidin'ity magazay ity mba hahitanao ny tolotra sy ny varotra arakaraka ny vanim-potoana misy anao.
Izy ity dia fivarotana mozika mega izay nosokafana tamin'ny faran'ny taona 2013 ary any Williamsburg no misy azy. Te hampiseho amin'izao tontolo izao ity magazay fa tsy maty ny vinyl sy ny cd ary hitohy miaraka amintsika mandrakizay izy ireo. Toa marina ny azy ireo satria fivarotana izay misy foana ny olona mijery sy mividy ny vokariny.
Azonao atao ny mahita rakipeo na vaovao na faharoa raha tianao ny hitahiry vola. Saingy satria fivarotana lehibe dia lehibe izy ireo, manana toerana ho an'ny kaonseritra, rakipeo na fampirantiana koa izy ireo ... zavatra tsara ho an'ny mpanjifa te ho ao anatin'ny magazay saika isan'andro.
Raha te-handeha amin'ny fivarotana vinyl manokana ianao amin'ny fikitika hafa amin'ny olon-kafa rehetra dia tokony handeha any amin'ny Black Gold ianao. Azonao atao ny mijery sy mividy vinyl eo am-pisotro kafe matsiro. Fa manana toetra mampiavaka azy koa izay tsy ananan'ny fivarotana vinyl hafa: manana biby tototry izy ireo. Na dia tsy ankafizin'ny olona maro aza ity farany.
Farany, tsy te-hamarana ity lisitra ity aho raha tsy manonona ny fivarotana Academy Records mahafinaritra. Azonao atao ny mahita azy io amin'ny laharana West 18th Street. Ity fivarotana ity no paradisan'ny vinyls, ary ho hitanao ny entana faharoa tanana. Na dia mieritreritra ianao fa tsy magazay mendrika izany raha toa ka manana ny zava-drehetra izy ireo, Azoko lazaina aminao fa fivarotana tena atoro azy io ary mendrika ny mandehandeha mamaky azy io, mety ho gaga ianao amin'ireo zavatra hitanao ao.
Ankehitriny, raha te hitsidika ny tanàna lehibe any New York ianao nefa tsy fantatrao izay haleha hividy CD na vinyl, dia tsy manana fialantsiny intsony ianao, ankehitriny dia fantatrao izay alehanao hividy sy hankafizanao ireo magazay mozika tsara sy manokana. Fantatrao ve ny iray amin'ireo magazay ireo na efa nandehananao tany? Lazao anay hoe manao ahoana ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mividiana rakitsoratra sy vinyl any New York
Fitsangatsanganana any Paris, inona no ho hitanao ao an-tanàna